China Isikhululo sokutshaja i-EV sisitya sombane esisebenza ngodonga Wallbox EV Ishaja ye-40A yokwenziwa kunye nefektri | Itekhnoloji edibeneyo
Isikhululo se-EV sokutshaja Wall-Mounted Charger Wallbox EV Charger Point 40A
Ifektri ithengisa kakhulu i-US Type 1 EV Home Level 2 Charger, i-EV Charging Station, Samkela ithuba lokwenza ushishino nawe kwaye sinethemba lokonwaba ngokudibanisa ezinye iinkcukacha zezinto zethu. Umgangatho ogqwesileyo, ixabiso elikhuphisanayo, ukuhanjiswa kwexesha kunye nenkonzo enokuthenjwa inokuqinisekiswa. Ukufumana eminye imibuzo kufuneka ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.
Izixhobo eziqhutywa kakuhle, abasebenzi abafanelekileyo bengeniso, kunye neenkampani eziphezulu emva kokuthengisa; Siye sathandwa kakhulu ngokumanyeneyo, nabani na oqhubekayo nombutho uyaxhamla “umanyano, ukuzimisela, ukunyamezelana” kwiFektri ethengisa kakhulu isitishi sombane i-Wall-Mounted Electric Charger Wallbox EV Charger Point 40A, ukuba ufuna indawo ephezulu umgangatho, ukuhanjiswa ngokukhawuleza, okungcono emva koncedo kunye nomthengisi wexabiso elifanelekileyo eTshayina kunxibelelwano lwexesha elide, siya kuba lolona khetho lwakho lusebenzayo.
1. ITSHABALALA ZONKE ii-EVs nee-PHEVs: Iyahambelana ngokupheleleyo nazo zonke izithuthi zoMbane kunye neePlagi-ku zeHybrid Electric Vehicles ezithengiswa eMelika nase Canada. Ukubandakanya: IChevy Bolt, iNissan Leaf, iFord Fusion, iBMW i3, iChevy Volt, iToyota Prius, iTesla (eneadaptha).
2. UKUTSHATHA NGOKUGQIBELELEYO NOKUFAKELWA NGOKUGQIBELELE: Ukuhlawuliswa ukuya kuthi ga kwi-8x ngokukhawuleza kunama-standard AC Level 1 EV kwitshaja ezongezelelweyo eziqikelelweyo kwi-25-35 yeemayile zoBubanzi ngeYure nganye. Yenziwe ngobunjineli ukulungiselela ukuFakelwa kunye nesibiyeli esinyukayo somhlaba wonke.
3. UKUSETYENZISWA KWE-AMPERAGE NE-MODERN COMPACT: Lungisa i-Max Current Output (48A, 40A, 32A, 16A) ukuxhasa iMilinganiselo yeeSekethe ezininzi (48A, 40A, 32A, 16A). Faka kwiindawo ezingaphezulu ngobunono, ubumbano kunye noyilo lwangoku.
Egqithileyo Yenza iYunithi yetshaja ye-EV esemgangathweni yaseMelika yeeMoto zombane ngohlobo 1
Okulandelayo: I-16A 32A 40A 48A Amandla oMbane oMbane oMdonga oMtsha wodonga onyuswe ngetshaja yetshaja yombane
ukubiza iimoto zombane
Itshaja ye-ev yorhwebo
itshaja ekhawulezayo yesithuthi sombane
Ukutshaja ngokukhawuleza kwezithuthi zombane
Izikhululo zokuHlawula iiMoto zikaRhulumente
izikhululo zokutshaja esidlangalaleni
Chwetheza i-2 16A 11kw EV itshaja yeZithuthi zombane ...
Chwetheza iNqanaba 1 le-Wall Wall Mounted Charger Wall ...